काेराेनाबारे देशभरिका यी डाक्टरसँग लिन सकिन्छ परामर्श – Health Post Nepal
काेराेनाबारे देशभरिका यी डाक्टरसँग लिन सकिन्छ परामर्श
२०७७ कार्तिक २४ गते १८:१७
कोरोना उपचार प्रभावकारी बनाउनको लागि केन्द्र र प्रदेश मातहातमा रहेका रहेका अस्पतालमा रहेका चिकित्सकसँग परामर्श गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले र्फोकल पर्सन तोकेको छ।
मन्त्रालयका सह—प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले विभिन्न अस्पतालका चिकित्सकले सम्बन्धित प्रदेशको टेलीमेडिसिन सेवा हब र प्रदेश अस्पतालका चिकित्सकले केन्द्रीय हब अस्पतालका चिकित्सकहरूसँग परामर्श गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताए।
मन्त्रालयले विभिन्न अस्पतालका लागि फोर्कल पर्सन समेत तोकेको छ। सम्बन्धित प्रदेशका चिकित्सकहरुले तोकिएका फोकल पर्सनलाई फोन, एसएमएस र इमेलमार्फत कन्सल्टेसन सेवा लिन सक्ने छन्।
उनीहरुसँग टेलिमेडिसिनका विषयमा राय परार्मशका लिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा सरदचन्द्र बराल र डा. सनिस गुरुङ,सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढीमा डा. शेरबहादुर कमार र डा कपिल गौतम, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा डा.नारायण केसी रहेका छन्।
त्यसैगरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्यास) वीर अस्पतालमा डा. विष्णुदत्त पौडेल र डा.अच्युत कार्की, कोशी अस्पतालमा डा देनप्रसाद आचार्य र डा. प्रविणकुमार झा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा डा सुर्दशन थापा र डा सुरेन्द्र कुँवर र जनकपुर अस्पतालमा डा.रामदेव चौधरीलाई फोकल पर्सन तोकिएको छ।